ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ဘန်ဘန်..ဘန်ဘန့်ဘန်...
please be kind to myanmar people said...
သန်းရွှေကို ယမမင်းလောက် ခပ်မြင့်မြင့်ရာထူးမပေးချင်တာတော့ အမှန်ပဲ...
လေနတ်သားဆိုရင်တော့ နာဂစ် တရားခံ တွေ့ပြီဗျို့။ :P
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ကျောသား ရင်သား ခွဲခြားတာတွေ မလုပ်သင့်ဘူး။ မေးချင်တာက နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို အနောက်နိုင်ငံကနေ နှင်ထုတ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှု ဘယ်တော့ စတင်မလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေ နဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီစာရွက်မှာ ရှေနေကုလား သန်းတင်က ပလီတွေဆောက်ခွင့်နဲ့ အခွင့်ထူးတွေပေးရင် . . နအဖရဲ့ မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံဖို့ ဗြောင်ကြီးကို စည်းရုံးထားတယ်။ ပလီဆောက်ခွင့်ရရင် ကလိမ်ကကျစ်ကျတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံကြပါလို့ စည်းရုံး ပြောဆိုချက်ဟာ လူကျင့်ဝတ်နဲ့လုံးဝကို မကိုက်ညီပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေက. .. အိမ်ရှင်မြန်မာတွေကို စစ်ကျွန်ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ ကိစ္စဟာ ဘယ်လောက်အထိ ကောက်ကျစ်လဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
တောင်ဥက္ကလာပ မှာလဲ ပလီဆောက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် နအဖနဲ့ အပေးအယူလုပ်ခဲ့လို့ အခုဆိုရင် ပြဿနာတက်နေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလဲ မွတ်ဆလင်တွေဟာ နအဖရဲ့ မတရားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို အဓိက ကူညီနေကြပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ကြီးဆိုးနိုင်ရေး အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံပါဆိုပြီး မရှက်မကြောက် ပြောနေကြပြီ။ ခင်ဗျားတို့က ဦးခင်မောင်ဆွေလို တိုင်းပြည်အတွက် ထောင်ထဲမှာ နေလာခဲ့သူကို နအဖ ရွေးကောက်ပွဲထောက်ခံတဲ့အတွက် နှစ်ပြားမတန်အောင် ပြောဆိုကြပါတယ်။ ကျုပ်တို့ဆီမှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေက အားကျိုးမာန်တက် နအဖ ရွေးကောက်ပွဲ ထောက်ခံနေတာကို ခင်ဗျားတို့က ဘာလို့ ပါးစပ်တွေ ပိတ်နေတာလဲ? ကုလားကိုကြောက်ပြီး .. . မြန်မာအချင်းချင်းပဲ ရန်ဖြစ်ရဲတဲ့ အိမ်ကျယ်စိတ်ဓါတ်ကို မြင်တွေ့နေရတာလား? ဒီမိုဘက်တော်သားပါလို့ ပြောနေတဲ့ ကုလားတွေကလည်း ကုလားအချင်းချင်းဆိုတော့ မသိဟန်ဆောင်နေပြီ။
မြန်မာတွေကိုပဲ အရေးယူတယ်.. ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်နေပြီး ကုလားကို ဘာမှ မလုပ်ဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို့ မြန်မာမျိုးချစ်တွေက ဘယ်လို မြင်လာမလဲဆိုတာ နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပါ။ ဖြောင့်မတ်တဲ့ စိတ်ထားခင်ဗျားတို့မှာ မရှိရင် အားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေ နည်းသွားလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ လက်ခံရင်.. ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေ နိုင်ငံရေးမှာ ပတ်သက်နေတာကို ဆန့်ကျင်ပေးကြပါ။ ထပ်မေးချင်ပါတယ်. . . နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို ဘယ်တော့ အနောက်ဖက်ကနေ နှင်ထုတ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှု စတင်မလဲဆိုတာ ဖြေပေးကြပါ။ ဒီမိုဘလော့ပိုင်ရှင်ဆိုရင်တွေလဲ . . နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ ကုလားတွေကို ဆန့်ကျင် ရှုံ့ချမှုကို စတင်ပြီးလုပ်မလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါ။
F**k you - zaw myo
မဆဲပါနဲ့။ ဆဲခံရလို့ နောက်ဆုတ်တဲ့ လူစားထဲမှာ တောသားမပါဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား? ကျုပ်က အထောက်အထားတွေနဲ့ ခိုင်ခိုင်လုံလုံရေးထားတာပါ။ မှားတယ်ထင်ရင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီဘလော့ပိုင်ရှင် ဦးပေါဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ထောင်ထဲမှာ ၁၀ နှစ်ကျော် နေခဲ့သူ မြန်မာလူမျိုး ဦးခင်မောင်ဆွေကို အပျင်းအထန် ဝေဖန်ခဲ့သူပါ။ ကလိမ်ကကျစ်ရွေးကောက်ပွဲကို ကူညီနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်တွေက တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ လုပ်ခဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ကုလားတွေက.. .မြန်မာလူမျိုးတွေ စစ်ကျွန် သက်ဆိုးရှည်ရေးကို ကူညီနေတာကို အထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြထားပါတယ်။ ဦးပေါအနေနဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေကို ဝေဖန်ခဲ့သလို ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်ကို ဝေဖန်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အပေါ်က ကော်မန့်ကို ဒီမိုဘလော့အများစုမှာ ဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ ဒီမိုတွေရဲ့ သမာသမတ်ကြမှုကို မှတ်ကျောက်တင်တဲ့ ကော်မန့်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုတွေမှာ ဖြောင့်မတ်မှုရှိရဲ့လားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။
ကုလား ဇော်မျိုး..shut your f**king mouth up.
ဟိဟိ.. အဲလောက် အဆင့်အတန်း မြင့်မားတဲ့ ကော်မန့်ကို ဒီတခါပဲ တွေ့ဖူးတယ်။ မင်းပဲစဉ်းစားကြည့်နော်. . နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်တယ်။ အနောက်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာ ရှိနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ပေးကြတယ်။ ဗီဇာတွေကို ပိတ်ပင်တယ်။ ကျောင်းတက်နေသူတွေကို အတင်းပြန်ပို့တယ်။ အနုပညာရှင်တွေကိုလည်း ဗီဇာ ပိတ်တယ်ကွာ။ စစ်အဏာရှင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူတွေကို အဲလို အပြစ်ပေးတာကို ငါက နားလည်တဲ့အပြင် ထောက်ခံခဲ့တာ အားလုံးသိပါတယ်။
အခုဆိုရင် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အသင်းတွေက ပလီဆောက်ခွင့်နဲ့ တခြားအခွင့်အရေးတွေကို နအဖဆီကတောင်းပြီး အပြန်အလှန်အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံတယ်။ အဲဒီကုလားတွေက ငါတို့မြန်မာတွေကို စစ်ကျွန်ဘ၀ကို သက်ဆိုးရှည်အောင်လုပ်ပေးနေတာကွ။ ဦးခင်မောင်ဆွေဆိုလို ထောင်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘ၀ကို စတေးခဲ့သူကိုတောင် စစ်ကျွန်သက်ရှည်အောင်လုပ်ရင် အားမနာတမ်း ဝေဖန် အပြစ်တင်ကြတယ် မဟုတ်လား? ဘာဖြစ်လို့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေကို ဒီမိုတွေက ဝေဖန်.. အပြစ်ဖို့ လက်ရွံ့နေတာလဲ? ကိုယ့်အိမ်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေကို ကြောက်လို့လား? ငါနားမလည်တဲ့ အပိုင်းရှိရင်.. ရှင်းပြပေးပါလား။ ဒီမိုဘက်တော်သား အမည်ခံထားတဲ့ ကုလားတွေကလည်း.. . ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေလုပ်ရပ်ကို နှာစေးနေတယ်နော်။ ၀ါးဟားဟား
သို့........ မြင့်မြတ်သည့်မြေမှာ ယုတ်ညံ့သည့်မွတ်ဆလင်ဝါဒမရှိစေရ မြင့်မြတ်သည့်မဟာမြန်မာဝါဒီသခင်ကြီး Mr. ★ဆရာဇော်မျိုး★
အံမယ်လေး... ဆရာ့နာမည် ခေါ်ရတာ မောလိုက်တာဗျာ။ နာမဝိသေသနဘွဲ့ထူးတွေကလည်း နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနယကအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ထက်တောင် ရှည်လျားမယ်ထင်တယ်။
ကျနော့်ပို့စ်တွေမှာ (အဲ.အဲ...ဘလော့ဂ်တကာမှာ)ကွန်မင့်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ လာရောက်ချီးမြှင့်ဖော်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုဇော်မျိုးရေးသွားတာတွေကို အသေးစိတ် လိုက်မဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် အမည်မသိလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်နေပုံကို တစွန်းတစ မြင်နေရတဲ့အတွက် ဆဲသွားတဲ့ အမည်မသိကို ပြန်ရေးတာလို့ ယူဆလိုက်ပါမယ်။ ဒီအတိုင်းသာမှန်ခဲ့ရင် ဟိုက တခွန်းလောက် ဆဲလိုက်။ ကိုဇော်မျိုးက အရှည်ကြီးပြန်တုန့်ပြန်လိုက်နဲ့ မြင်နေရတာ... ကြားထဲက ကိုဇော်မျိုးကို ကျနော်သနားလာတယ်။ ကိုဇော်မျိုးအားထုတ်ရတာ မတန်ဘူးလို့လည်း တွေးမိပါတယ်ဗျာ။ ဟို အမည်မဖော်ဘဲ ဆဲတဲ့ ငနဲကတော့ ကွယ်ရာမှာ အူနှိပ်နေလောက်ပြီလို့ ထင်တယ်။ ကျနော်က ကြားထဲက မခံချင်ဘူးဗျာ။ ဒီတော့ ဆရာဇော်မျိုးရေ....ကိုယ်က မြင့်ြုမတ်တဲ့မဟာမြန်မာဝါဒီသခင်ကြီးတယောက်ပဲ။ ဆရာကြီးတဆူပဲ။ နာမည်မဖော်ဘဲ ဆဲတဲ့လူတွေကို ဖက်ပြီး ရန်မဖြစ်ပါနဲ့ဗျာ။ မောပါတယ်။
ဆရာဇော်မျိုးကို လေးစားကြည်ညိုခြင်း အနန္တဖြင့်....
ကျုပ်ကို မသနားနဲ့။ ကျုပ်ရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်က မြန်မာအချင်းချင်း အတင်းအဖျင်းပြောတဲ့ နွားအိုတွေရဲ့ ညံ့ဖျင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို တိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ မြန်မာအချင်းချင်းပဲ ရန်ဖြစ်ရဲတဲ့ အိမ်ကျယ် စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း အရမ်းကို မုံန်းနေသူပါ။ ဒီတော့ အပေါ်ကကော်မန့်မှာ ရေးထားသလို . . . ခင်ဗျားရဲ့ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုကို သိချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားဟာ နအဖရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သူဖြစ်သလို.. ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံသူတွေကိုလည်း ဝေဖန် ထိုးနှက်ရာမှာ လက်စွမ်းပြောင်တဲ့သူပါ။ ထောင်ထဲမှာ တိုင်းပြည်အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ နေခဲ့သူကိုယ်တောင် ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားပြီး ဦးခင်မောင်ဆွေကို အတင်းအဖျင်းပြောခဲ့တယ်။ ကဲဗျာ.. အခု ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်တွေက ရွေးကောက်ပွဲကို အပေးအယူလုပ်ပြီး ထောက်ခံပေးနေတဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်လို ဝေဖန်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ဒီမိုဘက်တော်သားလို့ အမည်ခံပြီး ခင်ဗျားတို့နဲ့ အတူတူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုလားတွေကတော့… မွတ်ဆလင် အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ နှာစေးနေတယ်။ ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့နဲ့ လက်တွဲနေတဲ့ ကုလားတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လို တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာ သိချင်တယ်။
Hi ! Ko Paw,
It is right what Zaw Myo said. U (all of Myanmar Demo Bloggers such as Nge Naing, Ma Baydar,xx) should explain what your real attitude is.
PS.Yuu tha lo Paw tha lo "reply" ma lote par ne.
Note: Actual f**king Idiot is Anonymous on Oct 20 10:37 AM
တွေ၇ဲ.သွေးကဘယ်လိုလဲ။အဲလောက်လေး နအဖ နဲ.
Hi Zaw Myo,
I am muslim. But i don't blame what you are talking about. You might hurt by muslim previous time. But pls think about it how many people hurt by you. You cannot say all of muslim are not good. Its depend Mr.Zaw Myo. I don't say all of muslim are good., but all of buddhism and christian not good too. I have helped the people who those need my help since when i was 15 years. But i don't mind who is buddhism or christian.We, the generation are no choice. If our parents are muslim we are trained by islam doctrine, if your parents were muslim you were become muslim. That doesn't matter what you believe, pls think youeself how many people have u helped with your hand? how many people let you lean on your shoulder? Even some the buddhist monk can't keep their rule. Please understand and be gentle.
ဪ.. ကျုပ်မှာ ဘန်ဘန် နဲ့ မိသန်းရွှေတို့ရဲ့ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာမှာ အုတ်ပိုင်းကျိုး တအိတ်လွယ်ပြီး ခဲဖိုးသွားတောင်းမလားလို့ စိတ်ကူးနေတဲ့ဟာကို၊ ဒီလောက်ပွက်ပွက်ညံနေမှဖြင့်၊ ဒီတပွဲတော့ ထားပါတော့၊ ထားလိုက်ပါတော့။
သာခင် ကိုယ်တော်ရှိုင်း said...
မြင့်မြတ်တဲ့ ဗိန္ဓောဆြာကြီး၊ ကုလားကိုးဆူဆြာကြီးရဲ့ မနားပဲ
ရွှေရွှေနဲ့ ဘန်ဘန်တို့ မင်္ဂလာပွဲကြီး
ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းသဘောပေါက်ပါတယ်။ မွတ်စလင်တွေမှာ hidden agenda ရှိတယ်ဆိုတာ။
သူတို့ဖာသာ အေးအေး pray လုပ်နေပါ။ ဘာမှပြောစရာမရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ muslim party ထောင်ပြီး နိုင်ငံရေးဝင်ပြီး အာနာရရင် ဘာဆက်လာမလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။
Buddhaူမန်မာူပည် အဓွန့်ရှည်ပါစေ။
မိုဟာမက် ဇော်မျိုး....အားပေးနေပါတယ် (အဆလမ္မာလေးကွန်း )
ကုလားငကြောင် ဇော်မျိုးက ကုလားပြောသလိုလိုနဲ့ ရန်တိုက်ပေးနေတာ သတိထားကြပါ..အဲဒီကောင် ကလေကလွင့်က နာမည်ကြီးအောင် ဘလောဂ်တကာ့မှာ ဆရာကြီး(နွားဂွေးထု)ပုံစံနဲ့ လိုက်ပြောနေတာ..နာမည်အတော်ကြီးခြင်နေရှာ ဘယ်သူမှလဲ သူ့ကို အလေးမလုပ်..စောက်ရူးစောက်ပေါကြီးလိုပဲ မှတ်ကြတယ်..အဲဒီကောင် ဘာပြောပြော နားမ၀င်ဘူး စောက်ရူး ဇော်မျိုး မအေလိုးရေ
ivory , သာခင် ကိုယ်တော်ရှိုင်း , အမည်မသိ။
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ အကုန်လုံးဟာ သူတော်စင်တွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ မပြောခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ မိုဟာမက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အားလုံးက မြင့်မြတ်ကြပါတယ်။ တမန်တော် မိုဟာမက်ဟာ မုဒိမ်းကျင့်.. လူသတ် ရုံတင်မကဘူး . . နောက်ဆုံးကွာ… မိမိချွေးမကိုတောင် ကြာကူလီခိုတယ်။ အဲလို အောက်တန်းကျတဲ့ အလုပ်မျိုးကို ချေးစားတဲ့ခွေးတောင် လုပ်တယ်လို့ မကြားမိပါဘူး။ ထို့အတူပဲ မွတ်ဆလင်ရဲ့ သင်ကြားချက်ဟာ အရမ်းကို ယုတ်ညံ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကုလားတွေဟာ လူလူသူသူ မနေတတ်ကြဘူး။ မင်းတို့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူများအိမ်တွေမှာ ခိုကပ်ပြီး နေကြရတယ်။ ကျေးဇူးကို မင်းတို့ မသိဘူး . . . အိမ်ရှင်တွေကို စော်ကားတယ် . . . အိမ်ရှင်တွေအပေါ် အကောင်းကြံတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကိစ္စလဲကြည့်ပါ။ မြန်မာအချင်းချင်း မသင့် မမြတ်ဖြစ်တာကို မင်းတို့ ကုလားတွေက အမြတ်ထုတ်နေတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ နအဖနဲ့ ပေါင်းပြီး အခွင့်အရေးယူတယ်။ ပြည်ပမှာ ဒီမိုတွေနဲ့ပေါင်းပြီး အခွင့်အရေးယူတယ်။ မင်းတို့လိုကောင်တွေကို လူလိုသဘောမထားနိုင်ဘူး။
ကုလားအားလုံးက မဆိုးပါဘူးဆိုပြီး ပါးစပ်ကြီးနဲ့မပြောနဲ့။ ကလေးကုလားစကားကို ဘယ်သူမှ မယုံဘူး။ အလုပ်နဲ့သက်သေပြပါ။ သခင်ကရင်တွေက နအဖနဲ့ ပေါင်းတဲ့ DKBA ကို ဆန့်ကျင်တယ်.. ဆဲတယ်။ သခင် ဗမာတွေက နအဖရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံတဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့လို လူတွေကို သုံးမရအောင်ဆဲခဲ့တယ်။ သခင်တွေရဲ့ နိုင်ငံမှာ နေတဲ့ မင်းတို့ကောင်တွေလဲ . . . . နအဖဆီက အခွင့်အရေးယူပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို အနောက်ဖက်နိုင်ငံတွေကနေ နှင်ထုတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို မင်းတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ပြပါ။ အဲလို လက်တွေ့ လုပ်ပြမယ်ဆိုရင် မင်းတို့တွေကို လူတွေက လေးစားလာမှာပါ။ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ ဘာမှ မလုပ်ပဲ အခုလို ကလေးကုလား လျှောက်ပြောနေမယ်ဆိုရင် . . . အလကားပဲ။ ရှင်းတယ်နော်?
☀ ထပ်မေးမယ်.. မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ထားကို ဖျောက်ပြီး နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို နှင်ထုတ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှု လုပ်မလား?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ဖြေပေးပါ။ ဒီမို ဘက်တော်သား စစ်မှန်ရင် အလုပ်နဲ့ သက်သေပြပါ။
ကုလားဇော်မျိုး Are you still not tired of creating new IDs to sell your bullshit ? Whatastupid moron!!
( ကုလားဇော်မျိုး Are you still not tired of creating new IDs to sell your bullshit ? Whatastupid moron!! )
ကလေး ကုလား စကားကို ဘယ်သူမှ အလေးမထားပါဘူး။ တည်တည် တံ့တံ့ပြောပါ။ စစ်ကျွန်သက် ရှည်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ . . . ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို တိုင်းပြည်သစ္စာဖေါက်စာရင်းထဲ မထည့်သင့်ဘူးလား? အဲဒီ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ မနှင်ထုတ်သင့်ဘူးလား ? ဖြေပေးလေကွာ။ ခွေးကုလားအချင်းချင်း ရန်တိုက်တယ်လို့တော့ မပြောနဲ့။ ဒီမိုဘက်တော်သား စစ်မှန်ရင် နအဖနဲ့လက်တွဲတဲ့ကုလားတွေကို ရန်သူလိုသဘောထားရမှာပဲ။ ဒီမိုဘက်တော်သား သခင်ကရင်တွေက . . . သခင်ကရင်အချင်းချင်း DKBA ကို ရန်သူလိုသဘောထားရင်.. မင်းတို့ စောက်ကုလားတွေလဲ အချင်းချင်းရန်သူလို သဘောထားရမှာပဲ။ သခင်ဗမာတွေလဲ နအဖရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံသူ ဗမာမှန်သမျှ ရန်သူလိုသဘောထားကြတယ်။ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားရဘူးဆိုတဲ့ မြန်မာစကားကို ကြားဖူးလား…. လူကျင့်ဝတ်ဆိုတာရော ကြားဖူးလား? မင်းတို့က မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ နအဖက်နဲ့ လက်တွဲနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို မဆန့်ကျင်လိုဘူးဆိုရင် အတိအလင်းပြောပါ။ တော်လှန်ရေးအပေါ် သစ္စာဖေါက်ချင်ရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနော်။
ဇော်မျိုးပြောတာ ဒီနေရာမှာ ထောက်ခံတယ်... မြန်မာပြည်မှာ မွတ်စလင်တွေ ပွဲလန့် တုန်း ဖျာခင်းနေတာ ကိုဝေဖန်တာ ဘယ်ဒီမိုကရေစီ ဘလော့ဂ်မှာမှ မတွေ့ ရဘူး။ ယုတ်ညံ့တဲ့ စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းနေတာချင်း တူတာတောင် ပြည်တွင်းက မွတ်စလင်တွေက အခွင့်ထူးခံဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်သူမဆို မကောင်းတဲ့စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းနေတဲ့သူတိုင်းကို ဝေဖန်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ အခုအချိန်ထိ ဘယ်ဘလော့ဂ် ကမှ အသံမထွက် သေးဘူး။ ဘာ့ကြောင့် နုတ်ဆိတ် နေကြသလဲ။ ဒါကို တိုက်ဖျက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ်စမှာ ဘယ်သူမှ အလေးမထားကြဘူး။ ဇော်မျိုးကို ဒီနေရာမှာ တကယ်ကို လေးစားတယ်။ မွတ်စလင်တွေ ထုတ်ထားတဲ့ကြေငြာချက်ကိုလည်း မြင်ပြီးပြီ။ ဘယ်သူမှ မဝေဖန်ကြဘူး။ တကယ်ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ။ ကိုပေါဘလော့ဂ်ကို အမြဲတမ်းလာဖတ်နေတဲ့သူပါ။ အနည်းငယ်မျှသော သဘောထားမတိုက်ဆိုင် တာက လွဲရင် သဘော တစ်ခုတည်းပါဘဲ။ စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံခိုင်းနေတဲ့ ပြည်တွင်းက မွတ်စလင် တွေကို ဘယ်သူမှ မဝေဖန်ပေမဲ့ ကိုပေါက ဝေဖန်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုပေါကိုလေးစားပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ဒုက်ခသည်တွေ အဖြစ်နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ မှီခိုနေကြတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ တွေ က လုံးဝ ပါးစပ်ပိတ် နေတယ်။ ကိုပေါဟာ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ နေပေမဲ့ စစ်အစိုးရကို ဝေဖန်တဲ့နေရာမှာ ( တခြား လူတွေ ကိုပေါလို မလုပ်ရဲဘူး) တကယ်လေးစား လောက်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် စစ်အစိုးရကို ကိုယ်ကျိုး အတွက်၊ သူတို့ မွတ်စလင် ဘာသာအကျိုးအတွက် တိုင်းပြည် စစ်ကျွန် တရားဝင် ဖြစ်မဲ့အရေးကို ထောက်ခံနေကြ/ ခိုင်းနေကြတဲ့ ပြည်တွင်းက မွတ်စလင်တွေကို အားလုံးနုတ်ပိတ်နေကြပေမဲ့ ကိုပေါကိုတော့ ဝေဖန်စေချင်ပါတယ်။ တကယ်ခံစားရလို့ ရေးလိုက်တာပါ။ တော်ရုံ ကွန်မန့် ပေးလေ့မရှိပါဘူး
ကုလားဇော်မျိုး ...Are you still not tired of creating new IDs to sell your bullshit ? Whatastupid moron!!
မိုဟာမက် ဇော်မျိုး....(အဆလမ္မာလေးကွန်း )
လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်ကျော်လောက်က ဘင်္ဂလားမှ အရွှယ်ကောင်း ယောကျာ်းရင့်မာ ကြီးတွေ လှေစီးပြီး မလးကို အလုပ်လုပ်ဖို့ ခိုးဝင်ရာမှာ ထိုင်းတပ်က ဖမ်းမိပါတယ်။ မိတော့ နအဖက မတရားညှင်းဆဲတာ မခံနိုင်လို့ ထွက်ပြေးလာတာပါတဲ့ ကလေး၊ နအဖ နှိပ်စက်လို့ ထိုင်းနယ်စပ်ကို ထွက်ပြေးလာတဲ့ ကရင်ဒုက္ခ သည်တွေလို ကလေးငယ် အမျိုးသမီး နဲ့ သက်ကြီး ရွှယ်အိုတွေမပါ ပါဘူး။ နအဖရဲ့  ယုတ်မာမှု အသုံးမကျမှုတွေကို ကောင်းကောင်း အသုံးချလိုက်တာပါ၊ ကျုပ်တို့ ရေမြေမှာ နေသော မူဆလင် တော်တော်များများကလည်း သူတို့ပြောတာမှန်တယ်လို့ ထောက်ခံကြတယ်။ ပြည်ပရောက် ကိုရွှေကုလားများ နဲ့ ဒေါ်လာစားတချို့ ကလည်း ဘင်္ဂလီများဘက်က သနားစရာကောင်းကြောင်း သက်သေလိုက်ကြပါတယ်။ မှားတယ်လို့ဝေဖန်ရင်လည်း နအဖ လူဖြစ်ရရှာတယ်။ အဘမ်းခံရရှာတယ်။
ဘာကြောင့်လဲလို့ ကျတော် စဉ်းစားလို့မရဘူး၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ သူတို့ကို ထောက်ပြဝေဖန်တာပါ။ ဘာသာခြား လူမျိုးခြားကို နှိမ်တာ မဟုတ်ပါ ။ ကျတော်ကိုယ်တိုင်လည်း သူများနိုင်ငံမှာ သွားရောက် ဝမ်းစာရှာနေသူ တဦးပါ၊ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား တစ်ယောက်ရဲ့  ဘဝကို ကိုယ်ချင်းစာ ကြည့်လို့ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကိုရွှေတင့်တို့ ကိုလှရွှေ တို့လို နာမည်ပိုင်ရှင် ဗမာမဟုတ်သော သူအချို့ ကတော့ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းတတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေရှိနေတာကို တော့ ဗမာတစ်ယောက် အနေနဲ့ သတိပေးပါရစေဗျို့ ။
ဇော်မျိုးပြောတာကို ဇော်မျိုး ထောက်ခံပါတယ်။ ( moron!!!)
ဗျို့ ဆရာဇော်မျိုး နိုင်ငံရေး ဘလောဂ်တွေဖတ်တာ မကြာသေးပေမဲ့ နေရာတကာမှာ တွေ့ရတာက ကိုဇော်မျိုးရဲ့ မှတ်ချက်တွေကြီးပါလား။ ကောင်းပါတယ်ဗျာ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေရဲ့ပို့စ် တစ်ခုမှာ မှတ်ချက်ပေးထားတာလေးတော့။ အဲဒါနဲ့ ကိုဇော်မျိုး ဘလောဂ်မှာ ဘာရေးမလဲ လိုက်ကြည့်တော့မှ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး အဓိကဖြစ်နေမှန်း သိတော့တယ်။ စစ်မျက်နှာတွေ အများကြီး တိုက်ဖို့ချွန်ပေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျ၊ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ့စီးပွါးရေးကို အဓိက ဂုတ်သွေးစုပ် ခြယ်ယ်လှယ်နေတဲ့ တရုတ်တွေရော ဘယ့်နှယ် သဘောထားတုန်းဗျ? အဲဒါလေးလဲ သိချင်လို့။
နောက်ထပ် သိချင်တာလေးတွေက အညာသားကြီးဆိုတော့ ဗမာအပြင် တစ်ခြားတိုင်းရင်းသားတွေကို ဘယ်လိုသဘောထားပါသလဲ? ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကလွဲရင် ကျန်တဲ့ ဘာသာဝင်တွေကိုရော ဘယ်လိုသဘောထားလဲ သိပါရစေဗျာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အရေခြုံနေတဲ့ အတွင်းရန်များ ရှိတာကိုရော လက်ခံပါသလား? မွတ်ဆလင်တွေအပြင် ကျန်တဲ့ဘာသာတွေမှာ အစွန်းရောက်တွေရှိတာ လက်ခံပါသလား? ပြီးတော့ ကိုဇော်မျိုးက မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်တာလား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကာကွယ် ဆောင့်ရှောက်တာလား? ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကာကွယ်ဆောင့်ရှောက်တာဆိုရင် ပြည်ပက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုပဲ အဓိကထားပါသလား၊ ပြည်တွင်းက နာမည်ကြီး ဖိုရမ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်က မွတ်ဆလင်တစ်ချို့ ဝင်သောင်းကျန်းသွားတာမှာ ကိုဇော်မျိုးရဲ့ ရဲရဲတောက် အရေးအသားတွေ မတွေ့ရလို့ပါ။
အပိတ်အနေနဲ့ ပြောချင်တာက မွတ်ဆလင် ဒါမျိုးလုပ်လို့ ငါလဲဒါမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုဇော်မျိုးကိုယ်တိုင်လဲ အသိနည်းတဲ့ အစွန်းရောက်သာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကျွန်တော့ကိုလဲ ကိုဇော်မျိုးထုံးစံအတိုင်း တံဆိပ်လျှောက်တပ်လဲ ရပါသဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ မေးတာလေးတွေတော့ ပြန်ဖြေပေးနော်။
စာမျက်နှာပိုင်ရှင်တော့ အားနာပါရဲ့ဗျာ ...
ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူလို့မြင်သူတွေကို စောက်မြင်ကပ်တဲ့
(ဇော်မျိုးပြောတာကို ဇော်မျိုး ထောက်ခံပါတယ်။ ( moron!!!) )
ဟိဟိ။ ဘယ်သူမှ မသိဘူးထင်ပြီး . . ငါ့ပြောတာကို ငါကပဲ ထောက်ခံနေတာကို မင်းက သိနေပြီပဲ။ မင်းတို့ စောက်ခွက်က ကျက်သရေတုံးပေမယ့် ဥာဏ်ကတော့ မဆိုးပါဘူး. .. ။ အဲလိုလုပ်လို့ ငါ့ကို အပြစ်မတင်နဲ့။ တကမ္ဘာလုံးမှာ မွတ်ဆလင်ဆိုတာ ဘာသာရေး အရေခြုံပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာ လူတိုင်းသိတယ်။ ပလီဆရာတွေ နိုင်ငံရေး ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ် ဘာသာရေး လုပ်တယ်လို့ပဲ သဘောထားရတယ်လေ။ အခုလည်း အိမ်ရှင် မြန်မာတွေ ဒုက္ခရောက်အောင် စစ်ကျွန်သက်ရှည်ရေးကို ရည်မျှော်ပြီး လုပ်နေတာကို မွတ်ဆလင်တွေ ဘာသာရေး လုပ်တယ်လို့ သဘောထားရမှာပဲ။ နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းတဲ့ မြန်မာလူမျိုး တွေကို ဥပမာ . . ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ဆိုရင် ဆဲခံရတယ်။ နအဖ နဲ့ အတူတူလုပ်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုး စီးပွားရေး သမားတွေကို ဗီဇာပိတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် . . .ရွေးကောက်ပွဲ ကလိမ်ကကျစ် လုပ်ရာမှာ ကူညီနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို ဗီဇာပိတ်ဖို့မလုပ်သင့်ဘူး။ အဲဒါ ဘာသာရေးလုပ်နေတာလေ။ အဲဒါကြောင့် . . ပလီဆရာတွေ ဘာသာရေးလုပ်နေတာကို မတိုက်ခိုက်လိုတဲ့အတွက် .. ငါ့ဖာသာ ငါ ထောက်ခံနေတာကွ။ သနားစရာလေးနော်? ၀ါးဟားဟား
အပေါ်ကကောင်တွေတယောက်မှ မဟုတ်တဲ့ နောက်လဒူတကောင် said...
ဇော်မျိုးသော ကိုပေါသော သောက်ရေး မကြီးပါဘူး ....
ဘယ်သူပါးစပ်က နတ်စကားထွက်လဲက သောက်ရေးကြီးတယ် ဗမာတွေရဲ့....
မေးစရာ ရှိရင် ဖြေစရာရှိရမယ်... အဲတာကို တာဝန်ယူစိတ်လို့ခေါ်တယ်...
ဒီဘလော့လာဖတ်တိုင်းဒေါသထွက်ရတယ်.... လခွီးတဲ့မှပဲ.... Shittt
ဖြေပေးပါအုံး၊ ကြိုတင်ရိုက်ထားပြီးသား Format
တွေထဲမှာ နာမည်လေးပြောင်းရိုက်ပြီး မဲပြာပုဆိုးလိုဖန်တရာတေနေတဲ့အဖြေမျိုး
လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ ကင်းကွာတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်နေလို့ ဒီမိုတွေဘ၀က နအဖကို စောက်တင်း စောက်ဖျင်းပြောတဲ့ အဆင့်ကနေ မတက်နိုင်တာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံရေး သမားအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေး ခွဲခြားဖို့ပြောကြတယ်။ အဲဒါကို မင်းတို့က အဟုတ်ထင်နေတယ်။ သူတို့ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်း ဖေးမကူညီပြီး မင်းတို့ကောင်တွေရဲ့ ခေါင်းပေါ်ကို ရောက်အောင်လုပ်နေလို့ မင်းတို့ ခံနေရပြီ။ ကုလားလိမ် မြအေးကို 88 ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး လိမ်ညာပြီး ဘယ်သူတွေက တင်ပေးနေတာလဲ? ကုလားတွေက တင်ပေးနေတာ မဟုတ်လား? ပလီတွေက မွတ်ဆလင် နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ငွေထောက်ပံ့နေတဲ့ ကိစ္စကို ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးခွဲထားတယ်လို့ မင်းတို့ပြောမလား? ပလီတွေက နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလားတွေကို ညွှန်ကြားချက်တွေ ထုတ်နေတာက ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ကင်းတယ်လို့ပြောမလား? မွတ်ဆလင်အမတ်ကိုပဲ မဲထည့်ရမယ်လို့ ပလီက စည်းရုံးတာကို မေ့ထားသလား? မင်းတို့တွေက လိမ်သမျှယုံ.. ပြောသမျှ အဟုတ်ထင်နေတဲ့ အဆင့်နဲ့တော့ . . .ကုလားက ချေးကို ထမင်းလို့ လိမ်ကျွေးရင်တောင် မြိန်မြိန်ကြီး စားမယ့်ကောင်တွေပါ။
ဥာဏ်မရှိသည့် ဒီမိုငတုံးများကို အလွန်အမြင်ကပ်သည့်
p.s ကုလားတွေက ဘာသာရေး အရေခြုံပြီး နိုင်ငံရေးမှာ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်နေတာ တကမ္ဘာလုံးက သိနေတယ်။ အဲဒါကို မင်းတို့ ဒီမိုတွေက မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ အဲလောက် ဥာဏ်ရည်နဲ့ နအဖကို ဖြုတ်ဖို့ မကြိုးစားလေနဲ့လို့ သတိပေးလိုပါတယ်။
၇ိုးသားဖြူစင်သောမြန်မာလုမျိုး တစ်ယောက် said...
အပေါ်က comment ကိုဘာမှ မတုံ့ပြန်တော့ဘူးလားဗျ ။